15 Dugsiyada Injineerinka Shahaadada Sare ee ugu Fiican
Halkan, waxaad ka heli doontaa iskuulada ugu hooseeya ee injineernimada si aad ugu bilowdo xirfadaada injineernimada ama edbinta kale, dugsiyadan ayaa hubaal ah inay qaabeeyaan oo ay horumariyaan kartidaada mustaqbal guul leh.
Injineeriyadu waa adeegsiga ama adeegsiga mabaadi'da iyo fikradaha sayniska si loo qaabeeyo loona dhiso mashiinno, qaab-dhismeedyo, gawaadhi iyo in badan oo dadaal-bini-aadam ah oo lagu yaraynayo qalabka shaqooyinka gaarka ah ee kala duwan.
Injineeriyadu waxay jirtay ilaa waqtiyadii hore markii uu aadanuhu hindisay habab nolosha looga fududeeyo ikhtiraaca mashiinada taas oo yareynaysa dadaalka aadanaha.
Injineerinnimadu waa edbin aad u ballaadhan oo ka kooban anshax-hoosaadyo badan. Qaar ka mid ah culuumta waaweyn waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn kuwan soo socda:
• injineernimada kiimikada
• Injineeriyada bulshada
• Injineeriyada farsamada
• Injineernimada beeraha
• Injineernimada korantada
• Injineernimada kombiyuutarka
• Injineernimada badda
• Injineernimada dharka
• Injineernimada batroolka.
• Qalabka / injineernimada birta
Waxaa jira jaamacado aad u tiro badan oo adduunka ah kuwaas oo caan ku ah khibradooda injineernimada laakiin kaliya kuwa ugu fiican ayaa noqon kara kuwa ugu fiican.
Liiska ugu sareeya jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan iyo kuliyadaha adduunka oo dhan ayaa hoos lagu taxay. Waxaa jira shuruudo aasaasi ah oo loogu qalmo injineer, qaar ka mid ah oo ay ka mid tahay helitaanka B.Eng qayb kasta oo ka mid ah injineernimada qayb ka mid ah ayaa go'aansaday inuu ku dhiirado.
Si aad u gasho koleej si aad u barato koorsada injineernimada, waa inaad ka gudubtay kiimikadaada, fiisigiska, aljabra, kalkulas, joomatari, bayoolaji iyo koorsooyin kale oo fara badan oo ku habboon in lagu galo kulliyadda.
Kulliyadaha injineernimada waxay ku siinayaan waxbarasho tayo leh sida iskuul caalami ah oo kaliya farqiga u dhexeeya waa heerka tartanka iyo qiimaha, eeg liistada 8 kulleejooyinka injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan ardayda Waxaan soo uruuriney inay ka yar yihiin tartamada iyo kuwa wax-ku-oolka ah.
Barnaamijka shahaadada masters-ka ee injineernimada, waa inaad ka gudubtay kuleejo adoo ka gudbay dhammaan koorsooyinka aasaasiga ah ee injineernimada iyo koorsooyinka kale ee injineernimada hoosaadyada ay tahay inaad dooratay.
Qaar ka mid ah koorsooyinka injineernimada aasaasiga ah waxaa ka mid ah Sawirka Injineerinka, Injineerka bulshada, Farsamoyaqaannada dareeraha, makaanikada injineernimada, injineernimada heerkulka, Heat iyo wareejinta ballaaran, Xoogga qalabka iwm.
Aad uga duwan habka loo maro shahaadada koowaad ee injineernimada oo qaadata in ka badan sanado, barnaamijka shahaadada mastarka wuxuu qaataa ugu dambeyn labo sano si loogu dhameystiro jaamacadaha badankood.
Dad badan ayaa horay u sii wata inay sii wataan shahaadada dhakhtar ee injineernimada taas oo aan u badneyn qof kasta oo qaatay shahaadada Masterka.
Intaad ku sugan tahay, waad ku baran kartaa injineernimada ama maadooyinkeeda kale jaamacadaha Kanada iyada oo loo marayo deeqda waxbarasho fiiri liiska 5 iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho
Dhaqtarka takhasuska ee injineernimada wuxuu qaadanayaa illaa 5-7 sano si loo dhammaystiro kiisaska badanaana waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay qaataan xirfad ku saabsan cilmi baarista iyo sii wadista barashada kulleejada laga yaabee inay u qalmaan borofisar.
Fursadaha Shaqada Injineerada
Machadka Teknolojiyada ee California, USA
Jaamacadda Stanford - USA
Jaamacadda Cambridge - Boqortooyada Ingiriiska.
Jaamacadda Harvard - USA
Jaamacadda Oxford - Boqortooyada Ingiriiska
Machadka Teknolojiyada Massachusetts - USA
Jaamacadda Princeton - USA
Jaamacadda California Los Angeles - USA
Machadka Farsamada Georgia - USA
Kulliyadda Imperial - Boqortooyada Ingiriiska
Jaamacadda Qaranka ee Singapore - Singapore
Jaamacadda California Berkeley - USA
Jaamacadda Teknolojiyada Nanyang- Singapore
Jaamacadda Tsinghua - Shiinaha
Injineerro waa dad bulshada gaar ugu ah; maxaa yeelay shaqadooda inta badan kiisaska waxay u janjeeraan horumarka aadanaha oo kiisaska badankood maalin kasta dhacaan, weligood shaqo la'aan ma ahan.
Had iyo jeer si fiican ayaa loo qaataa sidoo kale sababtoo ah waxay soo maraan cadaadis badan si ay u ogaadaan waxyaabo badan oo maalin kasta ah oo kaliya si ay u horumariyaan bini'aadamka iyo bulshada aan ku noolnahay dhammaanteen. Haddii injineernimada aad isku aragto inaad ku jirto waaxda dab-damiska. waad hubin kartaa idaacadaha VHF ugu fiican ee dab damiska.
Anaga oo aan ku sii dheeraanin, aan hoos ugu dhaadhacno iskuulaadka ugu fiican ee shahaadada koowaad ee adduunka.
•Machadka teknolojiyadda California
• Jaamacadda Stanford
• Jaamacadda Cambridge
• Jaamacadda Harvard
• Jaamacadda Oxford
• Machadka farsamada Massachusetts
• Jaamacadda Princeton
• Jaamacadda California California
• Machadka teknolojiyadda Georgia
• Kuleejka Imperial
• Jaamacadda Qaranka ee Singapore
• Jaamacadda California Berkeley
• Nanyang jaamacada teknolojiyada
• Jaamacadda Tsinghua
Injineeriyadu waa koorso / barnaamij aad u khuseeya dunida maanta sidaa darteedna saameynta ay ku dhex leedahay bulshada lama iloobi karo.
Waa barnaamij caan ah oo muhiim ah oo loo yaqaan 'STEM' si loo caddeeyo iskuul / koleej u qalma in loo arko sida adduunka ugu fiican maahan wax fudud.
Dugsigani wuxuu ku yaal liiska ugu sarreeya machadyada cilmi baarista ee ugu caansan adduunka. Waxay ku taal Pasadena California USA. Waxay markii ugu horreysay ku bilaabatay machad farsamo mararka qaar 1894 laakiin markii dambe waxay u wareegtay jaamacad bixisa shahaadada 1910.
CALTECH waa iskuul caan ku ah ardaydeeda tirada yar ee ku nool USA. Waxay leedahay sheybaarro taxane ah iyo qalab lagama maarmaan u ah barashada waxayna ku takhasusaan oo keliya sayniska saafiga ah iyo kuwa la dabaqay, la yaab ma leh in adduunka loo aqoonsado inuu yahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada heerka koowaad ee ugu wanaagsan adduunka.
Waxaa jira khuraafaad socda oo ah haddii aadan maqal jaamacad Stanford meel kasta oo adduunka ah markaa waxaad si dhab ah ugu nooshahay qaybta kale ee meeraha.
Stanford waxay haysaa rikoor ka sarreeya ardayda 15000 waxaana lagu xusaa maalin kasta dugsiyada sare ee Mareykanka iyo adduunka oo dhan. Stanford waa iskuul aan u baahnayn hordhac.
Waxaa si weyn loogu aqoonsan yahay kaalinteeda cilmi baarista iyo injineernimada waxaana lagu magacaabaa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu sareysa adduunka.
Midkani waa midka ugu da'da weyn adduunka; taas oo sabab u noqon karta waxbarashadeeda heerka iyo horumarka.
La aasaasay sanadkii 1209, waxay sumcad ku leedahay ka qalinjabinta tiro dhan oo aqoonyahano ah qeybaha kala duwan ee waxbarashada maalin kasta. Cambridge waxay leedahay qaab qayb ka mid ah injineernimada kaas oo ku daraya wax kasta oo aad xiiseyn karto injineernimada.
Harvard waa mid ka mid ah iskuulada loo yaqaan 'ivy league schools' ee ku yaal Mareykanka. Dhallinyaro kasta oo Mareykan ah waxay rabaan inay ka hor galaan Harvard iskuulada kale ee liiskooda ku jira. Waa mid ka mid ah tobanka dugsi ee ugu sarreeya Ameerika.
Harvard waxay ku jirtaa liiska seddexda dugsi ee ugu horreeya ee sumcad ku leh injineernimada Mareykanka. Harvard waxay leedahay aagag injineernimo oo muhiim ah laakiin aan ku xaddidnayn: Bioengineering, Cell iyo Cadka Engineering, Computer Engineering, Qalabka iyo injineernimada makaanikada, Quantum Engineering, Science and Engineering Education, Solar Geoengineering, Injineerinka korantada, Sayniska deegaanka iyo injineernimada, Biomaterials iyo Therapeutics .
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn adduunka Ingiriiska.
Waxaa la ogyahay inuu yahay kan labaad ee aduunka ugu da'da weyn isla markaana sanado badan kasbaday barashada ardayda waxbarida wax ku oolka ah marka loo eego nidaamka jaamacadeed ee caadiga ah. Agagaarka Cambridge, oxford waa iskuul lagu xisaabtamo. Waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee ugu fiican dugsiyada injineernimada shahaadada koowaad.
MIT waxay ku jirtaa jaamacadda injineernimada ugu sareysa adduunka. Waxaa la aasaasay 1861 oo ah jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal Cambridge.
Waxay leedahay barnaamij goyn cad oo ay ku shaqeeyaan waxayna leedahay toban qaybood oo injineero ah oo u go'ay oo ay ku shaqeeyaan.
Aeronautics iyo Astronautics, Injineer kiimikaad, Mechanical Engineering, Sayniska Nukliyeerka iyo Injineerinka, Machadka Injineerinka Caafimaadka iyo Sayniska, Injineerinka Madaniga iyo Deegaanka, Injineerinka Korontada iyo Sayniska Kombiyuutarka, Machadka xogta, nidaamyada iyo bulshada, Sayniska Qalabka iyo Injineerinka, Injineerinka noolaha.
Sababtoo ah barashada MIT waa qaali, waxaad u baahan kartaa deeqda waxbarasho si ay kuu taageerto.
Kani waa mid kamid ah iskuulada Ivy League ee USA. Waxay ku bilaabatay jaamacad gaar loo leeyahay 1746 at Princeton USA.
Waxay kujirtaa 7th ugu wanaagsan jaamacadaha ugu sareeya ee injineernimada aduunka. Princeton wuxuu leeyahay lix waaxood oo injineernimo adag oo wali laga yaabo in loo qeybiyo.
Waxay kala yihiin; Kiimikada iyo injineernimada injineernimada madaniga iyo deegaanka, sayniska kombiyuutarka iyo injineernimada korontada, farsamada iyo injineernimada aerospace, cilmi baarista howlaha iyo injineernimada maaliyadeed.
Eigenossiche Technische Hochschule (ETH) Zurich wuxuu ku sugan yahay Zurich Switzerland. Eth Zurich ma leh wax ka yar lix xarumood oo kala duwan oo STEM ah. Switzerland waxay sumcad ku heshay been abuur; baradhada baradhada, mindi ciidamada Switzerland iwm taas oo aan layaab lahayn ETH ZURICH ayaa aduun weynaha looga aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu sareeya aduunka.
Mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican aduunka gaar ahaan Mareykanka. UCLA waa jaamacad dawladeed.
Dugsigooda injineernimada wuxuu bilaabmay mararka qaarkood 1945 inkasta oo nidaamka jaamacadeed uu bilaabmay 1919 wuxuuna si isdaba joog ah ugu koray sanadihii la soo dhaafay in ka badan lix waaxyo injineernimo.
UCLA waa uun dugsiga ugu fiican ee injineernimada adduunka.
Tani waa jaamacad guud oo ku taal Atlanta Georgia oo la aasaasay 1885.
Markii hore waxay bixinayeen oo kaliya shahaadada injineernimada ilaa markii dambe markii ay go'aansadeen inay ballaariyaan si ay u helaan koorsooyin kale oo shahaadada ah.
Asal ahaan, jaamacaddu waxay bixisaa qiyaastii sagaal waaxood oo injineernimo ah oo ay ka mid yihiin: Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Kiimikada iyo Bio-molecular Engineering, Injineerka madaniga iyo deegaanka, injineernimada korantada iyo kombuyuutarka, injineernimada warshadaha iyo injineernimada, sayniska maaddada iyo injineernimada, injineernimada farsamada, nukliyeerka iyo Injineernimada shucaaca.
Caadi ahaan loo yaqaan Imperial College London, magaceeda oo buuxa waa Imperial College of Science, Technology iyo Medicine.
Waa jaamacad dawladeed; mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu horreeya adduunka oo ay dhigtaan in ka badan 17,000 oo arday. Kuleejka boqortooyadu wuxuu leeyahay in kabadan 3,765 shaqaale xoog leh.
Kulliyadda Imperial, waxaa jira ku dhowaad toban dugsi injineernimo oo ay ka mid yihiin; Aeronautics, Bioengineering, Injineeriyada kiimikada, injineernimada madaniga iyo deegaanka, Computing, Dyson School of Design Engineering, Earth Science and Engineering, korontada iyo injineernimada elektarooniga ah, Qalabka iyo injineernimada farsamada.
Kulliyadda Imperial waxaa si caan ah loogu yaqaanaa bariddeeda tayo sare leh iyo adeegsiga miisaska gacanta ee mabaadi'da fasalka ee ardaydeeda taas oo ah sababta ay si fudud ugu faani karaan inay yihiin kuwa ugu fiican injineernimada adduunka guud ahaan.
Kani waa jaamacaddii ugu horreysay oo ay yeelato dowladda Singapore.
Waxay ku soo bilaabatay jidka 1905. Halku dhigoodu wuxuu u socdaa: "Waxaan Injineer Xarago" oo aan sinaba been u ahayn. Waxay bixiyaan barnaamijyo injineernimo oo aad ugu habboon xilligan iyo xitaa mustaqbalka.
Xarumahooda oo ah kuwo si cad u jajaban waxay kobcinayaan khibradooda cilmi baarista iyo daahfurnaanta. Iskuulka ugu sareeya aduunka ee heer sare ah oo sidoo kale ah mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican aduunka wuxuu bixiyaa barnaamijyada injineernimada hoos ku qoran: Marine iyo Offshore Engineering, Tamarta, Injineeriyada ee Daawada, Nidaamka Elektarooniga ah ee Isku-dhafan, Robotics iyo Sirdoonka Mashiinka, Next Dekedda Jiilka, Xalka Magaalooyinka iyo Joogtaynta, injineernimada Quantum.
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha dadweynaha ee ugu da'da weyn nidaamka Jaamacadda California, haddii uusan ahayn kan ugu da'da weyn. UC Berkeley waxaa lagu aasaasay Berkeley 1868. Waa iskuul aad u balaaran oo ay hada wax kabadan 40, 000 arday.
Si kastaba ha noqotee, guddiga maamulka marwalba aad ayuu uga taxaddaraa inuu u oggolaado lambarka inuu ka sarreeyo tirada loo baahan yahay oo u dhiganta shaqaalaha tacliinta. Tayada waxbarasho ee loo yaqaan 'UC Berkeley' waa mid heer sare ah oo aan la fahmi karin. Waxay kujiraan mid ka mid ah shan iyo tobanka ugu fiican iskuulada injineernimada aduunka.
Waxaa jira ku dhowaad sideed waaxood oo injineernimo ah UC Berkeley halkaas oo aad ku baran kartid sida ugu fiican: Bio-injineernimada, injineernimada madaniga iyo deegaanka, Sayniska korantada iyo kombiyuutarka, sayniska injineernimada, injineernimada warshadaha iyo cilmi baarista howlaha, sayniska maaddada iyo injineernimada, injineernimada farsamada iyo nukliyeerka injineernimada.
Waxaa la ogyahay inay tahay jaamacadda labaad ee ugu da'da weyn Singapore leedahay. Aad u caan ah sayniska iyo tikniyoolajiyadda, waxaa jira waaxyo badan oo ka tirsan NTU.
Waxaa jira ilaa 36 xarumood oo cilmi baaris ah oo ku yaal NTU; wax yar uun la yaab ma leh sida weyn ee ay dunida injineernimada ugu leeyihiin Singapore iyo adduunkaba. Fiirinta koorsooyinka qaarkood ama waaxda injineernimada ee laga heli karo jaamacadda injineernimada ugu sareysa adduunka waa Kiimikada iyo injineernimada injineernimada, injineernimada madaniga iyo deegaanka, Sayniska kombiyuutarka iyo injineernimada, injineernimada korantada iyo elektarooniga, sayniska maaddada iyo injineernimada, farsamada iyo injineernimada aerospace.
Iskuulkan iyo kuwa kale oo badan ayaa bixiya abaalmarino deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda injineernimada, guji HALKAN si aad u aragto liiska oo dhameystiran.
Shiinaha waa dalka ugu weyn marka aan ka hadlayno wax soo saarka dhaqaalaha adduunka, waxaa xaqiiqo ah oo keliya in jaamacad ku taal Shiinaha ay tahay inay ugu sarreyso liiska jaamacadaha injineernimada ugu fiican adduunka. Waxaa lagu aasaasay 1911 magaalada Beijing Shiinaha.
Dhawaan, jaamacaddu waxay ka sarreysaa 36,000 arday arday ah waxayna leedahay sumcad adag adduunka iyo deegaanka u dhow Shiinaha.
Waad dooran kartaa inaad ku qaadatid shahaado dugsiga qayb kasta oo ka mid ah qaybaha soo socda ee dugsiga: Kiimikada kiimikada, injineernimada korontada, injineernimada injineernimada, injineernimada aerospace, injineernimada madaniga ah, sayniska macluumaadka iyo teknolojiyada, sayniska maaddada iyo injineernimada, injineernimada farsamada.
Tani waxay soo afjareysaa 15ka dugsi ee ugu fiican shahaadada koowaad ee injineernimada adduunka oo ay weheliso mid kasta sida ku cad faahfaahinta.
Iskuuladan liistada leh waxay hayaan aqoonsi caalami ah sidaa darteed waa kuwo aad u tartan badan oo qaali ah laakiin qaar ka mid ah waxay bixiyaan abaalmarino deeq waxbarasho ardayda xiiseyneysa, Waxaan dhawaan daabacay maqaal aan ku taxay 12 iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka oo leh deeqo waxbarasho
Iskuuladani waxay leeyihiin sharaf caalami ah adduunka oo dhan, u tagida midkoodna waxay hubaal kaa dhigi doontaa injineer buuxa iyo wixii intaa ka badan, maadaama aad ka qalinjabisay mid ka mid ah dugsiyadan shahaadadaada waxaa si toos ah u aqoonsan shaqaalaha adduunka oo dhan iyo maadaama injineerada ay yihiin had iyo jeer loo baahan yahay maalin kasta, waxaad hubtaa inaad ka shaqeysid boos wanaagsan waddan kasta.
Iskuuladan ugu fiican ee iskuulada injineernimada waxay si isku mid ah kuugu dhisaan shabakad balaaran oo xiriir ah, haddii ay abuurto ama aad naqshadeyso wax cusub oo waxtar ku soo kordhin kara adduunka waxaad lahaan laheyd xiriiro sax ah oo aad ugu yeerto nooc kasta oo gargaar ah.
Kulliyadaha ugufiican ee loogu talagalay Shahaadooyinka Ingiriisiga ee Hoose ee leh Kharashka Iskucelceliska Lacagta
Barnaamijyada Shahaadada Injineerka Madaniga ah ee Online-ka ah ee ugu jaban
Barnaamijyada Sare ee Qalin-jabinta injineernimada
Koorsooyinka injineernimada codka ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin
Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kuwa jaamacadeed
Xidhiidhka kafaala qaaday Barashada Hagaha Dibadda
Iskuulada Injineerinka Jaamacadeed ee ugu hooseeya
Previous Post:16 Top MBA ee Kanada la'aanteed GMAT
Post Next:13 Deeqo Sare Oo Loogu Talagalay Ardayda Aan Dhaqanka Aheyn